दुई वर्षमा आयल निगमको छलाङ, यी हुन् इतिहास रच्ने उपलब्धी
काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम नमुना संस्थानका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। निगमको संस्थागत र नीतिगत सुधारमा जोड दिएपछि निगमको पहिचानमा फेरिन थालेको छ। एक समयमा नेपाल आयल निगम बेथितिको अड्डाका रूपमा प्रख्यात थियो। तर निगमको नेतृत्वमा सुरेन्द्रकुमार पौडेलको इन्ट्री भएसँगै आफ्नो परिचय फेर्न निगम सफल बनेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि निगम सक्षम बन्दै गएको छ।
अहिले आयल निगमले पुराना रोकिएका र केही नयाँ गरी दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माण एकसाथ अघि बढाएको छ। इन्धन डिपो विस्तार, ग्यास प्लान्ट, प्रयोगशाला, डिपो अटोमेसन, पाइपलाइन, ईआरपीलगायत आयोजना निगमले अघि बढाएको छ। महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा हेरिएको मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको सफलतापछि निगमले अन्य महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ।
निगमले अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म ल्याउन विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। मोतीहारी-अमलेगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने आईओसीसँग सहमति भैसकेको छ। सहमति अनुसार अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले सर्भेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आयल निगमलाई बुझाइ सकेको छ।
परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदका लागि छानबिनको क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ। त्यस्तै गोरखपुर देखि भैरहवासम्म निर्माण गरिने प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनका लागि खरिद गरेको जग्गा छानबिनको क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ। उक्त आयोजनको हाल सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ।
निगमले प्रादेशिक संरचना बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने एक/एक वटा अन्ताराष्ट्रियस्तरको वातावरणमैत्री र सुरक्षित पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमताको भण्डार गृहको कामलाई उत्साहका साथ अघि बढाएको छ। यसको सुरुवात पोखराबाट गरिएको छ। अहिले पोखरामा १० हजार किलि डिजेल प्रेट्रोलको भण्डारण क्षमता वृद्धिको टेण्डर मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ।
निगमले हवाई इन्धन डिपो निर्माणका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। चन्द्रगढी, दाङ, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, फाप्लु, मन्थली, खानिडाँडा (खोटाङ) र साँफेबगरमा हवाई इन्धन डिपोहरू निर्माण गरिने भएको छ। यी ठाउँ हवाई इन्धन डिपो सञ्चालनका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि थप हवाई इन्धन डिपो निर्माण गरिने भएको छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन भरखरै सकिएको छ।
आयल निगमले सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा प्रत्येक प्रदेशमा एकरएक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प निर्माणको योजना अगाडि बढाएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा आइसकेको छ। उक्त पम्प निगमको स्वामित्वमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पम्प निर्माणका लागि जग्गा लिजमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। झापा र महेन्द्रनगरमा भने जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा पम्प निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका वा कम प्रयोगमा रहेका मट्टितेल भर्टिकल स्टोरेज टैंकलाई पेट्रोलमा रुपमान्तरको योजना अघि बढाइएको निगमले जनाइएको छ। धनगढी, नेपालञ्ज, विराटनगर, अमलेखगञ्ज र पोखरामा उक्त कार्य अघि बढाइएको हो। टैंकलाई पेट्रोल पम्पमा रुपमान्तर गर्न टेण्डर आव्हान गरिएको समेत निगमले जनाएको छ।
यस्तै व्यावसायिक ग्यास र घरायसी ग्यास सिलिण्ड छुट्याउने प्रक्रिया समेत थालिएको छ। घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ केजी सिलिण्डर बनाइने निगमको भनाई छ। व्यावसायिकका लागि भने १९.५ किलोको ग्यास सिलिण्डर बनाइने तयारी छ। यसो गर्दा घरायसी र व्यावसायिक ग्यास सिलिण्डरको मूल्य पनि केही भिन्नता आउने पनि निगमको भनाई छ।
निगमले सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीको विकासका लागि कार्य योजना बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीको विकास पछि हुन सक्ने पेट्रोलियम पदार्थको माग र आपूर्तिको आकलन गर्न अध्ययन गरिने निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास खरिद विक्रीको दश वर्षको प्रक्षेपण गरेर दीर्घकालीन योजनाहरू तयारी गर्ने निगमको तयारी छ। उक्त विषयमा हाल अध्ययन भइरहेको निगमले जनाएको छ।
ओलीलाई वामदेवकाे जवाफ : ‘पार्टी फुट्दा कति सिट आउँछ भन्ने मलाई अनुभव छ’
महिला लघुवित्तलाई आइपीओ निस्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
आर्थिक मुद्दाहरुमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निजी क्षेत्रको घोषणा
राज्यको सम्पत्तिमा ओलीका नेताको राइँदाइँ, १० अर्बको ब्रह्मलुट
भ्रष्टाचारकाे अभियोगमा किर्गिजस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ
प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ : नेता आचार्य
हो ! किर्तेप्रसाद ओली बहुप्रतिभाशाली छन्
सर्वाेच्चमा शम्भु थापाकाे प्रश्न : श्रीमान्, पदअनुसार संविधान फरक हुन्छ र ?
पार्टी अध्यक्ष जुन समूहले दिन्छ, म त्यतै जान्छु : वामदेव गौतम
प्रचण्ड-नेपाल समूह रुपन्देहीको प्रचार समिति गठन